Iran: Novonoina ho faty i “Voafonjan’ny loko” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2009 10:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Français, Español, বাংলা, Deutsch, English
Novonoin'ny fitondram-panjakana Iraniana tamin'ny Zoma maraina tamin'ny faha-23 taonany ny tovoavy 23 taona antsoina hoe Delara Darabi
, izay voaheloka ho namono olona tamin'ny faha-17 taonany ary notazonina nandritra ny taona maro tao amin'ny Fonjaben'i Rasht Central. Nahazo ny lazan'ny anarana ho “voafonjan'ny loko” i Delara noho ny fahaizany mandoko ny fiainana am-ponja izay mampiaiky volana ny maro.
Namoaka fanambarana ny Amnesty International fa novonoina i Delara Darabi na dia eo aza ny famelana azy hiaina mandritra ny roa volana navoakan'ny Lehiben'ny Fitsarana tamin'ny 19 Avrily.
Mpamaham-bolongana maro, ary tafiditra amin'izany ihany koa ny mpahay lalàna, no nizara ny fahatsapany tamin'ity famonoana ity ary mitsikera ny rafi-pitsarana Iraniana mamono olona amina heloka azo lazaina fa madinika.
Mohmmad Mostafai, mpahay lalàna izay nanaraka akaiky ity raharaha Delara ity no , nilaza [fa]:
Nanome baiko ny famonoana ny Mpitsara Javid Nya. Taorian'izay dia izy no mpampanoa lalàna tamin'i Rasht, izy no nanome baiko ny fitoraham-bato, ary ankehitriny dia efa nandao ny vatan'i Delara Darabi ny fanahiny. Misy ny manameloka an’ i Delara. Ny sasany milaza ny rainy ho meloka, ary ny hafa kosa indray miteny fa ny mpitsara azy no meloka. Fa izaho kosa miteny fa ny rafi-pitsarana no diso. Nahoana no mikiry mamono zaza tsy ampy taona ny rafi-pitsarana, nefa maro ny firenen-kafa manerantany no mandrara ny famonoana olona latsaky ny 18 taona?
Nanampy io hevitra io ihany koa i Mostafai izay niaro zaza tsy ampy taona maro tany amin'ny fonja iraniana, fa novonoiny tsy nisy fampilazana ny mpisolovaa azy sy ny fianakaviany i Delara satria fantatr'izy ireo tsara fa “vahoaka an'arivoarivony” no hanohana azy manerantany.
Mampitombo be loatra ny isan'ny olona mahalala ity raharaha ity angamba i Mostafai, saingy fantatra mazava kosa fa maro ny mpanohana an'i Delara na amin'ny fiainana andavanandro na an-tserasera.
Vao nikarakara fihetsiketsehana manoloana ny masoivohon'ny Repaoblika Islamika tany Londres hampitsaharana ny famonoana azy indrindra ny Amnesty International.
Tao amin'ny tontolon'ny virtoaly, dia nisy ny Fampielezan-kevitra hamonjena an'i Delara tany amin'ny sehatra twitter sy Facebook.
Baloch nilaza ny fitondrana Iraniana ho “mamafy sy mijinja ny fahadalan'olombelona”. Manontany ny hevitry ny mirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena moa ny mpamaham-bolongana amin'ity resaka famonoana ity.
Sassan Aghayi indray nanoratra tononkalo [fa] mitondra ny lohateny hoe “Rahampitso angamba” mikasika an'i Delara. Nolazainy fa mihoatra (ho toy ny sakelimihoajoro) ity tantara ity ka mendrika hanaovana pôezia. Misy andininy manao hoe:
Rahampitso angamba na rahafak'ampitso
No haka olona hafa indray ny anjelin'ny fahafatesana tsy mety afa-po
Angamba io olona io dia ianao
Ardavan indray moa nanoratra [fa] fa hatory tsy hanonofy ratsy intsony i Delara rahalina.